ओमिक्रोन भेरियन्ट नेपालमा पनि आइपुग्यो, यसबाट बच्न के गर्ने ? जान्नुहोस् - Madhesh Pati
ओमिक्रोन भेरियन्ट नेपालमा पनि आइपुग्यो, यसबाट बच्न के गर्ने ? जान्नुहोस्
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार ०२:४८ बजे
मधेश पाटी,काठमाडौ । नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसका बारे जानकारी दिन मन्त्रालयलले अहिले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ ।
६६ वर्षीय विदेशी नागरिकको सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षीय व्यक्तिलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२४ नोभेम्बरमा ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो संक्रमित पुष्टि भएपछि ३ डिसेम्बरसम्म अर्थात् १० दिनभित्रै यो नयाँ स्ट्रेन ३५ वटा देशसम्म फैलिसकेको छ । संसारभरी यसका करिब चारसय संक्र`मित भेटिएका छन् ।भारत र नेपालमा दोस्रो लहरका लागि डेल्टा भेरियन्ट जिम्मेवार ठानिएको थियो ।
नयाँ भेरियन्टको संक्रा`मकताको विषयतमा विज्ञले चेता`वनी पनि जारी गरिसकेका छन् । कतिले ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा १० गुणा बढी गतीमा फैलन सक्ने बताएको छ । नयाँ भेरियन्टको विषयमा संसारभरी डरको स्थिति छ र एकपटक पुनः प्रतिब`न्धको स्थिति निम्तिएको छ ।
त्यस्तै विश्वमा ओमिक्रोनमाथि बढ्दो खतराका बीच अमेरिकाबाट खुसीको खबर आएको छ । अमेरिकाका शीर्ष चिकित्सा अधिकारी डा एन्थोनी फौसीले प्रारम्भिक लक्षणहरूले यो भाइरसको डेल्टा रूपभन्दा कम खतरनाक हुनसक्ने सङ्केत गरेको बताएका छन्।
तर सिंगापुरले भने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोभिड–१९ को ‘ओमिक्रोन’ रूप यसको अन्य भेरियन्ट ‘डेल्टा’ र ‘बिटा’ भन्दा बढी संक्रामक हुन सक्ने बताएको छ । यति मात्र होइन, पुन: संक्रमणको जोखिम पनि उच्च हुन सक्ने बताएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार फौसीले भनेका छन् कि भाइरसको ओमिक्रोन रूप देशमा द्रुत रूपमा फैलिरहेको छ, तर प्रारम्भिक संकेतहरूले यो भाइरसको डेल्टा संस्करण भन्दा कम खतरनाक हुन सक्छ। डेल्टाका कारण अमेरिकी अस्पतालमा बिरामीको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।
ओमिक्रोन संक्रमणको पहिलो केस विश्वमा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा रिपोर्ट गरिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका रिपोर्टहरूले मानिसहरूको अस्पतालमा भर्ना दर द्रुत रूपमा नबढेको पाइएको छ।
फौचीले बिडेन प्रशासनले धेरै अफ्रिकी देशहरूबाट यहाँ आउने अन्य देशका नागरिकहरूको प्रवेशमा लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने विचार गरिरहेको बताए। “आशा छ हामी समयमै प्रतिबन्ध हटाउन सक्षम हुनेछौं,” उनले भने। हामी दक्षिण अफ्रिका मात्र होइन अन्य अफ्रिकी देशहरूले सामना गरिरहेको कठिनाइहरूको बारेमा धेरै नराम्रो महसुस गर्छौं।